Magaalada Muqdisho oo dib loo dhisayo Inkastoo Xaaladda Ammaanka ay weli tahay mid aan Wanaagsanayn Axad, May 06, 2012 (HOL) — Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dhismayaal cusub, iyadoo weli ammaankeedu uu yahay mid aan wanaagsanayn, waxaase dadku iyo madaxda dowladdu ay rajo ka muujinayaan in ammaanku uu sidan ka wanaagsanaan doono.
"Ammaanku ma ahan weli mid la isku halleyn karo, laakiin dadku waxay go'aan ku gaareen inay noloshooda caadi kusoo celiyaan," ayuu yiri Axmed Sheekh Guure oo ka mid ah ganacatada Soomaaliyeed oo u warramayay wakaaladda wararka ee AFP. "Dadku waxay dhisanayaan guryahoodii burburay," ayuu hadalkiisa ku daray, Suuqa bakaaraha oo ah midka ugu weyn ee ku yaalla Muqdisho ayaa waxaa isna ka socda dib u dhis xoog leh, kaddib markii ay burburiyeen dagaallo sannadkii hore ku dhexmaray ciidamada DKMG ah, kuwa AMISOM iyo xoogagga Al-shabaab oo muddo ka talinayay suuqaas.
"Runtii anigu ma moodayn in dagaalku uu waqtigan qaadan karo," ayuu yiri Guure. "Ilaahay baa mahad leh, maxaa yeelay waxaan haysannaa fursad aan dayactir ku sameyn karno." Afhayeenka xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya, Inj. C/raxmaan Cumar Yariisow oo la hadlay AFP ayaa sheegay in dadku ay dib u dhis ku sameynayaan guryahooda. "Soomaalida dibadaha ku nool ayaa dib u soo laabanaya... si ay gacan uga geystaan dib u furidda ganacsiga."
"Dhismihii aad maanta dhisto, waxaa si fudud loogu dumin karaa berri," ayuu Bashiir mar kale yiri. Isagoo sheegay in walaac xooggan uu ka haysto guryaha ay dib u dhisayaan waxa ay berri ku dameyn karaan.Ganacsada kale oo lagu magaaabo Maxamed Cabdullaahi ayaa isaguna sheegay in ijaarka guryaha uu aad qaali u yahay, isagoo xusay in halkii qol oo deegaan ah ay kuugu kacayso bishii 10-dollar, isagoo sheegay in bilaha soo socda ay imaan karto inaadan ijaarka qolkii ku helin 40-dollar.
Ugu dambeyn, ganacsadahan wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay "Allaa weyn, waxaan rajeynayaa in dadku ay dib u soo laabtaan ayna dib u dhisaan dalka."Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Axad, May 06, 2012 (HOL) — Booliiska dalka Zambia ayaa xiray safaaraddii ay ku lahayd Soomaaliya magaalada Lusaaka ee xarunta dalkaas Kaddib markii uu dagaal dhexmaray safiirkii Soomaaliya ee dalkaas iyo safiir cusub oo sheegay inuu xilkaas u magacabaay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. MADAXWEYNE SHEEKH SHARIIF: "Dalka laguma sii-hayn karo KMG, mana jirto duruuf kallifaysa in KMG lagu sii jiro" 5/6/2012 5:46 AM EST